Ogaden News Agency (ONA) – Zenewi socdaal uu kaga quustay socdaal dambe ayuu ku tagay USA iyo SA – Omar jigjiga
Zenewi socdaal uu kaga quustay socdaal dambe ayuu ku tagay USA iyo SA – Omar jigjiga
Haday qaybiya-yaasha hawlaha zanawi (xoghayn iyo xafiis shaqaale) ku faraxsanaayeen casumadihii faraha badnaa ee heer calami ahaa ee xafiiskooda ku soo qulqulayay bilihii la soo dhaafay, maanta waxay qoomamaysan yihiin aqbalaadii ay ku dagdageen iyo ceebta ay ku danbaysay safarkii R/Wasaarahooda.
Kadib ceebtii ka raacday Zanawi shirkii G8ka ee lagu qabtay Mareykanka sanadkan, wuxuu u soo ambabaxay casuumad kale oo ahaa ka qaybgalka shirka dabaal-daga maalinta Africa (Africa Day) oo lagu qabanayay hoolka shirarka ee Africa, halkaasoo ay isugu soo bexeen dad farabadan oo diidanaa imaatinkiisa.
Ka dib; habeenimadii 24kii bisha May 2012 ayuu KT Zanawi wuxuu ku qoraa inuu khudbada sanadlaha ah ka akhriyo macadka Thabo Mbeki ee jaamacada South African university (UNISA). Jaliyada Ogadenia (Joka) oo laba aag oo jamacada ah ku hawl qaybsatay habeenkaas ayaa ku tashatay inay gaadhsiiyaan ceebtii ugu xumayd abid uu la kulmo Zanawi. Abaabulkoodu wuxuu ahaa mid casriyaysan; qaybta 1aad waxay boodhadh ku xardhan yihiin halkdhagyo soo jiidasho leh ku dhajisteen dhabarkooda iyo laabta waxayna isku tabeeleeyeen iridka laga galayay hoolka. Qaybta 2aadna waxay sii fadhiisteen safka hore ee kuraasta hoolka. Waxa weheliyay suxufiyad caan ah oo iyaduna ku qaybsanayd inay dunida u tabiso ficil loo malaynayay inuu noqon doono mucjisadii sanadka.
Markii madaxdii soo xaadirtay ayaa waxaa la shaaciyay in Zanawi uuna ku jirin madaxda timid; “Dhibaato wadankiisa kataagan darteed wuu soo safri kari waayay”; ayay tidhi gabadhii xidhiidhinaysay shirka. Waxaa kadaba hadlay mdaxwaynihii hore eeSouth africaThabo Mbeki oo yidhi; “wuu joogaa wadanka balse arimo xasaasi ah oo lasoo darsay daraadeed ayuu u baaqday”.
Halkan kadaaawo sawirada qayb ka mid ah:
Intaas kadib waxaa hadlay dadkii dibada ku soo arkay banaabaxa-yaashii JOKA oo walibana la soo siiyay qoraalo. Waxaa dhacday in qoraaladii dibada xubnuhu ku qaybiyeen la’is gaadhsiin waayay, waxaana markiiba dadku u fahmeen sababta uu Thabo ku sheegay “xasaasi” inay tahay tan waraaqaha ku qoran – xasuuq iyo danbiyo dagaal oo kasocda Ogaden iyo meelo kale oo Zanawi masuul ka yahay-.
Hadii uu yimaado wuxuu kamid noqon ahaa 5-madaxweyne African iyo 7000 oo arday iyo suxufiyiin isugu jiray oo dhagaysan lahaa khudbadiisa. Wuxuuse intaas oo dhan u lumiyay cabsi uu ka qabay waxa ay samayn doonaan xubnaha jaaliyadda Ogadenya iyo kuwa qawmiyadaha Ethiopiaee meesha imaanayay.
25kii bisha waxay Jalidaya Ogadenia warar hoose ku maqleen in Zanawi uu booqanayo safarada uu ku leeyahay Arcadia/Pretoria, arintaas oo dhalisay in mudaharaadkii waynaa ee la qorsheeyay inuu dhaco 2da galabnimo dib loogu soo celiyo 9ka subaxnimo.
Jaalidda Ogadenya oo xubnaheedii isaga keentay dhamaan gobolada wadanka ayaa aroortii hore isku gadaantay dhismaha safarada iyo wadooyinka soo gala. Waxaa xusid mudan in 7 safaaradood oo goobtas ku yaalay diblomasiyiintoodii kor uga soo bexeen dhismaha markii dambana aad moodaysya inay ku biireen banaanbixii.
Dadka halkaas isugu yimid waxay kor u dhaafayeen 1500 oo qof, waxayna lulayeen dhamantood calanka Ogadenia, waxayna ku qaylinayeen; Males hadhaco – Waa dadcun – Waa dilaa – iyo wax lamid ah. Dadka oo aad u xamaasadaysnaa tiradooduna badnayd oo dhulkii qaadi wayay ayaa isku taxay dhirtii wadada ku teedsanayd iyadood moodaysa in dadku cirka iyo dhulkaba buuxiyeen.
Suxufiyiin aad u tiro badan oo goobta soo buuxiyay ayay shaqaalaha safaaradu iskudayeen inay ka joojiyaan inay warkaas fidiyaan arintaas oo police ka iyo suxufiyiintuba si adag u diideen iyadoo dhacdadaasi ka dib police ku canaanayay Ethiopian-ka safarada dhex taagtaagan. General police ah ayaa yidhi; xag nooguma laha madaxwayne xun oo kanoo kale ahi in aanu ilaalino oon badbaadino. Hadalkaas oo markii danbe ay xataa Ethiopian ku maqlayeen suxufiyiintuna ay dhamaantood qalinka la gaadheen amaba duubteen.
Waxa layaab lahayd in police ku ay u ogolaadeen xubinkii JOKA u akhrinayay fariinta mudaharaadku inuu istaago albaabka safarada oo codbahiyahana afka u saaro qunsulkiiEthiopia oo halkaasi soo kan-badhuu-dhay.
2ba saac kadib ayaa halkaas laga akhriyay fariintii mudaharaadka oo ahayd tii ugu xooga badnayd een abid dhagaysto; ” Waa fariin ku socota dhamaan dadka aadaminimada jecel …waa fariin ku socota kalagii taliskii ugu danbeeyay Africa ee dadkiisu ay naceen isaguna dadkiisa nebcaaa … waa fariin ka socoto dadka kaliya eeAfricadhexdeeda lagu guumaysto” ayuu ku bilaabay.
Fariintaas oo 30 daqiiqadood akhriskeedu qaatay ayay aad u dhagaysanayeen shaqaalaha safaarada iyo qunsulkuba iyadoo xubinka akhrinayay iyo qunsulka ay u dhaxaysay halmitir waxaan ka badnayn.
Mudahaaradkan oon u aqoonsaday inuu yahay kii ugu xamaasada badnaa uguna waynaa een arko/maqlo ayaa la soo gagabagabeeyay abaara 12kii galabnimo, iyadoo safarada calaaamadaha maydka lagu weegaaray horteeda iyo dhinacyadeedaba. Ergooyin kii ka qaybqaatay mudaharadka ayaa tan iyo habeenimadii dhex mushaaxayay caasimadaPretoriaoo aad ugu faraxsan banaabaxa ay ka qaybqaateen waxayna subaxdii dib ugu kala laabteen goboladii ay ka soo safreeen